Muxuu Ergeygan Qatar u soo dirtay Soomaliya ku noqday dhexdhexaadiyaha ugu wanaagsan caalamka? | Hangool News
Muxuu Ergeygan Qatar u soo dirtay Soomaliya ku noqday dhexdhexaadiyaha ugu wanaagsan caalamka?
May 3, 2021 - Written by Hangool News 1
Hangoolnews:- Magaalada Muqdisho, waxaa maalintii seddaxaad ku sugan wefdi uu hoggaaminayo ergayga gaarka ah ee Qatar u qaabilsan wadaxaajoodyada iyo la dagaallanka argagixisada, Dr Mutlaq bin Maajid Al-Qaxtani.
Wuxuu Soomaaliya u joogaa arrimo wadahadal iyo dhexdhexaadin. Weftiga uu hoggaminayo waxay la kala kulmeen, Madaxweyne Farmaajo, Ra’iisul Wasaare Rooble, Guddoonka Aqalka Sare iyo Golaha Shacabka iyo qaar ka mid ah mucaaradka.
Maantana waxaa la filayaa in ay la kulmaan madaxweyneyaasha Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug. Ka hor safarkooda Muqdisho, wuxuu soo maray Hargeysa oo uu kula kulmay Muusa Biixi, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Iskeed Madaxbannanida ugu dhawaaqday ee Somaliland.
Ergeyga ay Qadar u soo dirtay Soomaaliya, wuxuu hore uga soo shaqeeyay wadaxaajoodyo la sheegay in uu guulo ka keenay, kuna muteystay abaalmarin caalami ah.
Abaalmarinta UN ee la siiyay
Mac-hadka Qaramada Midoobay u qaabilsan tababarada iyo cilmi-baarista (UNITAR) ayaa Dr Mutlaq u aqoonsaday inuu yahay dhexdhexaadiyaha ugu wanaagsanaa sannadkii 2020.
Sababta ugu weyn ee loo siiyay abaalmarintaas waxay ahayd dadaalkii uu ku bixiyay dhexdhexaadintii ururka Taliban iyo Maraykanka oo muddo ku dhaw 20 sano ay ciidankiisa ka dagaallamayeen Afghanistan.
Dadaallada loogu kala dabqaadayay Taliban iyo Maraykanka ayaa soo bilowday sannadkii 2011, inkastoo aan wax horumar ah laga samayn illaa iyo sanadkii 2018, markaas oo ay si qarsoodi ah u kulmeen wakiilo ka socda labada dhinac.
Qatar: Argagixisada la sheegay waa been
Ya isku haya Soomaaliya oo ay Qatar dhexdhexaadineysaa?
Ka dib kulamo is xigxigay, Maraykanka iyo Taliban ayaa dabayaaqadii February 2020, kala saxiixday heshiis ku aaddan nabadeynta Afghanistan.
Qoraalka sawirka,Mutlaq Al-Qaxtani iyo Ra’iisul Wasaare Rooble oo ku kulmay Muqdisho
Qodobada ugu waaweyn heshiiska ayaa kala ah:
In dhammaan ciidamada Maraykanka iyo kuwa NATO ay ka baxaan Afghanistan
In Taliban ay ballanqaado in Al-Qaacida aanay gabbaad ka siin doonin deegaannada ay maamusho
Iyo in wadahadallo ay dhexmaraan Taliban iyo xukuumadda Afghanistan
Dr Mutlaq ayaa la sheegay in uu dowr muhiim ah ku lahaa isu soo dhaweynta labada dhinac ee Taliban iyo Maraykanka.
Mar uu ka hadlayay kulan ka dhacay Dooxa, bartamihii 2019, Ergeygan Qatar, Mutlaq waxa uu sheegay in nabad waarta oo laga gaaro colaadda Afghanistan ay muhiimad aan “la koobi karin u leedahay shacabka dalkaaa.”
Yuu Dhexdhexaadinayaan Mutlaq oo isku khilaafsan Soomaaliya?
Mutlaq oo shahaadada Ph.D ee shuruucda caalamiga ah ka qaatay Jaamacadda Glasgow ee Scotland, ayaa Muqdisho kulamo kula qaatay madaxda Federaalka iyo xubno ka tirsan mucaaradka.
Balse, xiisadda siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa degtay ka dib markii uu golaha shacabka ka noqday xeerkii muddo kordhinta, kaas oo dhaliyay khilaaf xooggan.
Qoraalka sawirka,Dr Mutlaq oo kulan la qaadanaya qaar kamid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee Soomaaliya.
“Ma garanayo dhexdhexaadinta uu hadda ka sameyn karo Soomaaliya maadaama arimihii taagnaa lagu kala baxay, dalkuna u jihaystay doorasho,” ayuu yiri Axmed Sheekh Maxamed (Axmed Tiir) oo ka faallooda arimaha Carabta.
Qatar ayaa taageero xooggan siisa dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxaana kaalin weyn ay ka qaadatay dib u dhiska ciidamada qaranka.
Bishii June 2017 markii Qatar lagu soo rogay go’doominta ay horkacaysay Sacuudiga, ayaa dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay xiisaddaas.
Axmed Tiir ayaa rumaysan in go’aankaas uu ahaa dhexdhexaadnimo “u janjeerta dhanka Qatar”.
Doorashada baarlamaanka iyo madaxweynaha ee Soomaaliya ayaan weli laga gaarin heshiis, lamana oga xilliga ay dhici doonto.
Ra’iisal wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo lagu wareejiyay hannaanka doorashada ayaa ku baaqay shir ay madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada isugu imaanayaan 20-ka May magaalada Muqdisho.